Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Basic Pharmacology အခြေခံဆေးဝါးဗေဒ
ဆေးကို တကြိမ်လျင် မည်မျှပေးရသည်ကို ဆိုလိုသည်။ (ဒို့စ်)သည် လူနာ၏ အသက်ပေါ် မူမတည်၊ လူနာ၏ ကိုယ်အလေးချိန် အပေါ်မူတည်သည်။ တကြိမ်လျင် ဆေးအလေးချိန်မည်မျှ တိုက်ရမည်။ တနေ့ကို အကြိမ်မည်မျှ တိုက်ရမည်၊ အတိအကျ ညွှန်းရသည်။ အစားနှင့်နီး-ဝေးရမည်၊ ရေများများသောက်ရန်လို-မလို၊ ဆေးသောက်ပြီး နားရန်လို-မလို၊ အခြားဆေးများ နှင့်အတူတိုက်ရ-မတိုက်ရ စသဖြင့်လည်း ညွှန်းပေးရမည်။
ဆေးကို မည်မျှကြာကြာပေးရမည်။ ပဌမ (ကို့ စ်)ပြီးနောက် ဒုတိယ(ကို့ စ်) လိုချင်လိုမည်။ ဥပမာ မေးခိုင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို တလခြား နှစ်ခါထိုးရသည်။ တီဘီဆေးများပေးလျှင် ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ။
Epicutaneous (အရေပြားပေါ်သို့ပေးခြင်း၊) e.g. allergy testing, topical local anaesthesia ထုံဆေး၊ ဆေးတည့်မတည့် စမ်းခြင်း
Inhalational (ရှူဆေး၊) e.g. Asthma medications ပန်းနာဆေး
Enema (စအိုမှပေးခြင်း၊) e.g. contrast media for imaging of the bowel ဝမ်းခြူခြင်း။
Eye drops (မျက်စိထဲထည့်ခြင်း၊) (onto the conjunctiva), e.g. antibiotics for conjunctivitis မျက်စဉ်း
Intranasal (နှာခေါင်းထဲထည့်ပေးခြင်း၊) (into the nose), e.g. decongestant nasal sprays နားဆေးရည်
Oral/ Orally/By Mouth (ပါးစပ်မှပေးခြင်း၊) ဆေးပြား၊ ဆေးရည်၊ ဆေးတောင့်။) tablets, capsules, or drops
By gastric feeding tube (အစာလမ်းထဲပြွန်ဖြင့်ပေးခြင်း) feeding tube, or gastrostomy, many drugs and parenteral nutrition
Rectally (အစာဟောင်းအိမ်ထဲထည့်ပေးခြင်း) various drugs in suppository or enema form
3. Parenteral by injection or infusion (ထိုးသွင်းပေးခြင်း)
IV = intra-venous (သွေးပြန်ကြောထဲသွင်းခြင်း)e.g. total parenteral nutrition
IA = intra-arterial (သွေးလွှတ်ကြောထဲသွင်းခြင်း) e.g. vasodilator drugs and thrombolytic drugs
IM = Intra-muscular (ကြွက်သားထဲထိုးခြင်း) e.g. many vaccines, antibiotics
IC = Intra-cardiac (နှလုံးထဲထိုးခြင်း) e.g. adrenaline
S/C = Sub-cutaneous (အရေပြားအောက်ထဲထိုးခြင်း) e.g. insulin
IO = Intra-osseous infusion (အရိုးထဲသွင်းခြင်း)
ID = Intra-sermal (အရေပြားထဲသွင်းခြင်း) for skin testing some allergens, and also for tattoos and BCG vaccine
IT = Intra-thecal (ခါးရိုးဆစ်ပြွန် (စပိုင်နယ်-ကယ်နယ်) ထဲသွင်းခြင်း) for spinal anaesthesia and chemotherapy
IP = Intra-peritoneal (ဝမ်းဗိုက်အခေါင်း (ပယ်ရီတိုနီယမ်) ထဲသွင်းခြင်း) e.g. peritoneal dialysis
4. Other means (အခြားနည်းလမ်းများ)
Epidural (အပီဂျူရယ်) (ခါးရိုးဆစ်ထဲအရည်သွင်းခြင်း) (injection or infusion into the epidural space), e.g. epidural anaesthesia and Spinal anaesthesia (SA)
Risks of IV intravenous therapy သွေးပြန်ကြောထဲ ဆေးသွင်းခြင်း၏ အန္တာရာယ်များ
2) Phlebitis (သွေးပြန်ကြောရောင်ခြင်း)
3) Infiltration (အခြားနေရာများသို့ ဆေးရောက်သွားခြင်း)
4) Fluid overload (အရည်လိုအပ်သည်ထက် များသွားခြင်း)
5) Electrolyte imbalance (ဓါတ်ဆားအချိုး မမျှတဖြစ်သွားခြင်း)
6) Embolism (သွေးကြောပိတ်ခြင်း)
1. Antacids အစာအိမ် အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေးများ၊ Aluminium Hydroxide, Magnesium Trisilicate, Magnesium Carbonate, Calcium Carbonate
2. Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ရောဂါပိုးများကို နိုင်သည့်ဆေးများ၊
3. Anticholinereics/Antispasmodics (အင်တီ-ကိုလီနားဂျစ်) (အင်တီ-စပတ်စ်မိုးဒစ်) အနာသက်သာဆေး၊
4. Antihistamines အင်တီ-ဟစ်တမင်း၊ Avil, Burmeton, Alrid, Citrizine etc.
5. Antihypertensive အင်တီ-ဟိုင်ပါတန်းဆစ်ဖ်၊ သွေးတိုးကျဆေး၊
a. Diuretics (ဆီးသွားစေသည့်ဆေး) Hydrochlorothiazide, (Lasix) and Trosemide (Demadex), the combination of Triamterene and Hydrochlorothiazide (Aquazide), and metolazone (Zaroxolyn)
b. Beta-blockers (ဘီတာ-ဘလော့ကား) (Antolol), Propranolol, (Inderal), Metoprolol, Nadolol, Betaxolol, Acebutolol, Pindolol and Bisoprolol
c. ACE inhibitors (အေစီအီး-အင်ဟဗစ်တား)၊ (Enalapril, Captopril, Lisinopril. Benazepril, Quinapril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Fosinopril (Monopril), and Moexuoril,
d. Angiotinsin receptor blocker (ARB) (အေအာရ်ဘီ) Losartan, Irbesartan, Valsartan, Candesartan, Olmesartan, Telmisartan, and Eprosartan
e. Calcium channel blockers (CCBs) (စီစီဘီ) (Amlodipine, Sustained release Nifedipine, Felodipine, and Nisoldipine)
f. Alpha – blockers (အာလ်ဖါ-ဘလော့ကား) အုပ်စု (Clonidine)
6. Beta blockers = (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်သည့် အာရုံကြောစနစ် Autonomic (involuntary) Nervous System တွင် အရေးပါသော Adrinaline (Epinephrine) ကို တားဆီးမှု လုပ်သည့် ဆေး။ နှလုံးတင်းအားလျော့စေသည်။ နှလုံးခုံနှုန်းလျော့မည်။ နှလုံး၊ ဦးနှောက်နှင့် တကိုယ်လုံးရှိ သွေးကြောများ၏ ကြုံ့နိုင်စွမ်းနည်းစေမည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါတို့ အတွက် ဆေးများ၊ နှလုံးခုံနှုန်း မမှန်သည့် Cardiac arrhythmias, Tachycardias ရောဂါအတွက် သုံးသည်။ နှလုံးက အောက်စီဂျင် လိုအပ်မှုအား လျော့ချပေးသဖြင့် Angina pecetoris ခေါ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ အတွက်သုံးသည်။ သွေးတိုးကိုလည်းကျစေသည်။ အခြား အသုံးဝင်မှုများမှာ Migraine headaches (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူး ရောဂါ၊ ခြေလက်တုံအကြောက်ရောဂါ၊ Stage fright (Social phobia) အကြောက်ရောဂါတမျိုး တို့ဖြစ်သည်။
7. Corticosteroids =(ကော်တီကို-စတီရွိုတ်) အရောင်လျော့စေသည့်ဆေး၊ နီခြင်းကို သက်သာစေသည်။ (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေသည်၊ ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာစေသည့်ဆေးများ၊ အောက်ပါတို့အတွက်သုံးသည်။
- Endocrine Disorders (အင်ဒိုခရိုင်း)ရောဂါများ၊
- Rheumatic Disorders (ရူမက်တစ်)ရောဂါ၊
- Collagen Diseases (ကိုလာဂျင်)ရောဂါ၊
- Dermatologic Diseases အရေပြားနာများ၊
- Allergic states (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်း၊
- Ophthalmic diseases မျက်စိရောဂါများ၊
- Respiratory Disorders အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊
- Hematoloeic Disorders သွေးရောဂါ၊
- Neoplastic Diseases ကင်ဆာရောဂါ၊
- Edematous states ကိုယ်ရောင်ခြင်း၊
8. Dirutics = ဆီးသွားစေသည့် သွေးတိုး၊ ကိုယ်ရောင်ခြင်းများ အတွက် သုံးသည့်ဆေးများ၊
9. NSAID (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) = (စတီရွိုက်)မပါသော အနာ-အဖျား-အရောင်ကျ ဆေးများ၊ အများဆုံးသော အကိုက်-အဖျား-အနာ သက်သာဆေးများဖြစ်သည်၊
အုပ်စု (၁၃) မျိုးခွဲထားသည်။
1) Aminoglycosides (အမိုင်နိုဂလိုင်ကိုဆိုက်)အုပ်စု၊ အုပ်စုခွဲ (၇)မျိုးရှိသည်။
2) Carbapenems (ကာဘာပင်နင်)အုပ်စု၊ အုပ်စုခွဲ (၂)မျိုးရှိသည်။
3) Cephalosporins 1st generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် ပဌမမျိုးဆက်အုပ်စု)၊ အုပ်စုခွဲ (၅)မျိုးရှိသည်။
4) Cephalosporins 2nd generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် ဒုတိယ မျိုးဆက်အုပ်စု)၊ အုပ်စုခွဲ (၆)မျိုးရှိသည်။
5) Cephalosporins 3rd generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် တတိယမျိုးဆက်အုပ်စု)၊ အုပ်စုခွဲ (၈)မျိုးရှိသည်။
7) Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin (မက်ခရိုလိုက်အုပ်စု)၊ အုပ်စုခွဲ (၃)မျိး ရှိသည်။
13) Miscellaneous antibiotics အခြားသော ပဋိဇီဝဆေးများ၊ (၁၁)မျိုးရှိသည်။
1. Aminoglycosides (Amikacin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, netilmicin, Streptomycin, Tobramycin) (အမိုင်နိုဂလိုကိုဆိုက်) အုပ်စု၊ အုပ်စုခွဲ (၇)မျိုး ရှိသည်။
1. (1) Amikacin (Sulphate) (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) မီးလောင်နာ၊ သဲခြေအိတ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ မွေးစကလေး ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်း မြှေးရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊
1. (2) Gentamicin (Sulphate) (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ရုတ်တရက် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ သဲခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ ဆေးရုံ အတွင်းလူနာများနူမိုးနီးယား၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင် ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊
1. (3) Kanamycin (Acid Sulphate) (500 mg TDS IV/IM) (1 Gm QID Orally) (7.5 mg/kg TDS IV/IM) သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊ တီဘီ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ အသဲကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊
1. (4) Neomycin (Sulphate) (4-12 gm Daily Orally) (0.5% Topical) အစာလမ်းကြောင်းအားပိုးသန့်စေရန်၊ = 1 Gm QID x 1-2 days before bowel surëery အသဲကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ = 1 Gm QID ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာများ၊ မခွဲစိတ်မီ ပိုးသန့်စေရန်၊ အသဲအလုပ်မလုပ်၍ သတိမေ့ခြင်း၊ လိမ်းဆေးများ၊ (ကိုလက်စတီရော) များခြင်း၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ မကောင်းသောသတ္တိများ၊ နား- ကျောက်ကပ် တို့အား ထိခိုက်စေသည်။
1. (5) Netilmicin (Sulphate) UTI. (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) သွေးဆုံးပြီး အမျိူးသမီးများ၌ နောက်ကျသော ရင်သားကင်ဆာ၊ ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်စဉ် (အင်ဖက်ရှင်) ဝင်ခြင်း၊ အဆစ်ထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊
1. (6) Streptomycin 15 mg/kg OD-BD ပဋိဇီဝဆေး၊ တီဘီ၊ ပလိပ်ရောဂါ၊
1. (7) Tobramycin (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV) သဲခြေအိပ်ရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် အဆုပ်ရောင်ရောဂါ၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင် ခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အနာ-အကိုက် ပျောက်ဆေးများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အစာအိမ်အနာ၊ ကျောက်ကပ် မကောင်း၍ ဆီးနည်းသည့်ရောဂါ၊
2. Carbapenems (ကာတာပင်နင်)အုပ်စု၊ အုပ်စုခွဲ (၂) မျိူး ရှိသည်။ (Imipenem, Meropenem (ကာဘာပင်နမ်) အုပ်စု၊ (တစ်ရှူးများ သေ၍ ပုတ်ခြင်း)၊ (ပိုးဝင်ခြင်း)၊ (နူမိုးနီးယား-အဆုပ်ခဲခြင်း)၊ (ဝမ်းဗိုက်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းများ ပိုးဝင်ခြင်း စသည်တို့အတွက် ဆေးများ) အုပ်စုခွဲ (၂) မျိူးရှိသည်။
2 (1) Imipenem (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion) နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြား အနာ၊ ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ မေ့ဆေး ပေးစဉ် အစာခြေအရည်နည်းစေရန်၊ အရိုးအဆစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်း မြှေးရောင်ခြင်း၊ ယောင်္ကျားဆီးကြိတ် ရောင်ခြင်း၊
2 (2) Meropenem (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဝမ်းတွင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုပ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ မျိူးပွားလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊
3. Cephalosporins, 1st generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် ပဌမမျိုးဆက်အုပ်စု)၊ (Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin) (အရေပြားနှင့် အသားနုများ ပိုးဝင်ခြင်းအတွက်ဆေးများ) အုပ်စုခွဲ (၅)မျိုး ရှိသည်။
3 (1) Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အရိုး-အဆစ်နာ၊ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ မွေးလမ်း-ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်ခြင်း၊
3 (2) Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊
3 (3) Cefazolin (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM) နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ ယောင်္ကျားဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ သဲခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ မွေးလမ်း-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်လူနာများ၊
3 (4) Cephalexin (Monohydrate) (4-8 gm TDS IV) (0.5 – 1.5 gm TDS Orally/IV) (5 mg/kg BD Orally) အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ စိတ်ရောဂါ၊ အရေပြားအနာ၊
3 (5) Cefadroxil 500-750-1000 mg BD Orally နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ဖြစ်ပြီး နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ (အင်းဆက်အဆိပ်အတွက်ဖြေဆေး၊ အရေပြားနာများ၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊)
4. Cephalosporins 2nd generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် ဒုတိယမျိုးဆက်အုပ်စု)၊ (Cefaclor, Cefamandole, Cephalexin, Cefoxitin) (အသက်ရှူလမ်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်ထဲပိုးဝင် ခြင်း) အုပ်စုခွဲ (၆)မျိူးရှိသည်။
4 (1) Cefaclor (Monohydrate) (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ အားသီးရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ မွေးလမ်း-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
4 (2) Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အသက်ရှူလမ်း ရောင်ခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ အရိုး-အဆစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်လူနာများ၊ သဲခြေလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊
4 (3) Cephalexin (Monohydrate) (4-8 gm TDS IV for severe cases) (0.5-1.5 gm TDS IV) (5 mg/kg BD Orally) အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ စိတ်ရောဂါ၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ သွားပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊
4 (4) Cefoxitin (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) အရိုး-အဆစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်လူနာများ၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေးရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ HIV ဖြစ်ပြီး (နူထိုဖိးလ်) သွေးဖြူဥနည်းခြင်း၊
4 (5) Cefotetan UTI 20 mg/kg IV BD အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီယား၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ သွားပိုးဝင်းခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊
4 (6) Cefprozil (Monohydrate) အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်း-အထက်ပိုင်းရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊
5. Cephalosporins 3rd generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် တတိယမျိုးဆက်အုပ်စု)၊ (Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone) (အပြော့စား-အပြင်းစား ဗက်တီးရီးယားများဝင်ခြင်း)များ၊ ပြင်းပါက ထိုးဆေးပေးပါ၊ အုပ်စုခွဲ (၈)မျိူးရှိသည်။
5 (1) Cefixime (200-400 mg Daily Orally) (4 mg/kg BD Orally) အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယားဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊
5 (3) Cefoperazone (Na) (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV) သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ တင်ပဆုံတွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊
5 (4) Cefotaxime (Na) (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးမွေးလမ်းရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီယား၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ အရေပြားရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊
5 (5) Cefpodoxime (Proxetil) (100-100 mg BD Orally) (5 mg/kg BD Orally) အသက်ရှူလမ်းအထက်ပိုင်း-အောက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြား(အင်ဖက်ရှင်)၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ဦးခေါင်းလေခိုပေါက်များ ပိုးဝင်ခြင်း၊
5 (6) Ceftazidime Pentahydrate (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM) သွေးထဲဗက်တီးရီးယား ဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီရောင်ခြင်း၊ တင်ပဆုံတွင်းအင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ သဲခြေလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊
5 (7) Ceftizoxime (Na) (1,000 mg Daily IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) သွေးထဲ ဗက်တီးရီးယား ဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊
5 (8) Ceftriaxone (Na) (1-2 gm Daily IV/IM) (50 mg/kg Daily IV/IM) သွေးထဲ ဗက်တီးရီးယား ဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အသဲ-နှလုံးအစားထိုးခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ ခွဲစိတ်လူနာ၊ ဦးနှောက်အမြှေး ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊
6. Cephalosporins 4th generation (ကက်ဖလိုစပိုရင် စတုတ္ထမျိုးဆက်အုပ်စု)၊ (Cefepime) ခုခံအားနည်း နေသူအား အပြင်းစားဗက်တီးရီးယားများဝင်ခြင်း၊) Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) နူမိုးနီယား၊ အရေပြားအနာ၊ ကျောက်ကပ်အတွင်း ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊
7. Macrolides (မက်ခရိုလိုက်အုပ်စု) (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားပြည်ယိုခြင်း၊ အာခေါင် ရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ နူမိုးနီးယား၊ ကင်ဆာတမျိူး၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊
• Azithromycin (250-500 mg Daily Orally) (20 mg/kg Orally) သားအိမ်အဝ ရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းအထက်ပိုင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ (လိုင်မ်)ရောဂါ၊ အရေပြားနာ၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါများ၊ ဂနိုးရီးယား၊ ဆစ်ဖလစ်၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ရောင်ခြင်း၊ အစာခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ မွေးစကလေးငယ်များမျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မနိုင်ခြင်း၊ (ပနယ်စလင်) မတည့်လျင်ပေးခြင်း၊
8. Penicillins (ပနယ်စလင်အုပ်စု)၊ (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ) (လိုင်းမ်ရောဂါဆိုသည်မှာ ပိုးကောင်ငယ်တမျိူး အကိုက်ခံရ၍ အရေပြားတွင် အနီရောင် အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း ဖြစ်သည်၊) အုပ်စုခွဲ (၅)မျိူးရှိသည်။ (ပင်နစလင်များအကြောင်း နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ပါ၊)
• Amoxacilin ပနယ်စလင်အုပ်စုဝင်ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်သည်၊ H. influenzae, N. gonorrhoea, E. coli, Pneumococci, Streptococci, and certain strains of Staphylococci ပိုးတို့တွက် ကောင်းသည်။ နားအလည်ပိုင်းရောင်ခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ လည်ပင်းရောင်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အသံပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အဆုပ်ခဲခြင်း(နူမိုးနီးယား)၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်ခြင်း၊ 250 mg TDS; 500 mg TDS; 500 mg BD; 875 mg BD; Children older than3months but less than 40 kg are treated with 25 mg/kg/day in divided doses BD, 20 mg/kg/day in divided doses TDS, 40 mg/kg/day in divided doses TDS or 45 mg/kg/day in divided doses BD; (ဂနိုရီးယား)၊3Gm stat
• Ampicillin (250-500 mg QID Orally) (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Orally/IV/IM) နားအလည်ပို